Amasiko namasiko amaMasais - Enye yezindawo ezidume kakhulu | Ukuhamba kwe-Absolut
AmaMasais ngabantu abahlala eTanzania naseKenya. Bangesinye sezizwe ezaziwa kakhulu emhlabeni, ngokwengxenye ngenxa yezingubo zabo noma imidanso yabo, kepha ngaphandle kokukhohlwa ukuthi konke lokhu kufakiwe amasiko namasiko amaMasais esizokhuluma ngawo namhlanje.
Indlela yokuphila enelukuluku kakhulu enye ingxenye yomhlaba, yize ihlala ikhethekile ngokwabo. Kuningi abangasitshela khona nokungena edolobheni elifana naleli njalo kuyinto ejabulisayo. Ngabe ufuna ukwazi izimfihlo zayo ezikhetheke kakhulu?
1 Ukuze babe ngabantu abadala, kwakudingeka bazingele ibhubesi
2 Onamandla kakhulu, onezinkomo eziningi
3 Uhlelo lwabo lwezepolitiki lususelwa emihlanganweni yabadala
4 Umprofethi wabantu nemisebenzi yakhe
5 Utshani bungcwele
6 Awusoze wakhuluma ngomufi
7 Abesifazane, abesilisa nobucwebe babo
9 Igazi lezinkomo umuthi omuhle kakhulu
Ukuze babe ngabantu abadala, kwakudingeka bazingele ibhubesi
Phakathi kwamasiko namasiko amaMasais sithola lokhu. Konke kuqhamuka ekutheni idolobha lakhiwe yiminyaka. Ngakho-ke, kunamaqembu amaningana phakathi kwabantu akha lesi sizwe futhi aqala ebuntwaneni noma empini encane kuya kwiqhawe elikhulu noma umuntu omdala omncane nasebekhulile. Kepha isinyathelo esiyinhloko sokuba ngumuntu omdala ngokugcwele sasingu ukuzingela ibhubesi. Kwakungenye yezinkambiso ezivame kakhulu lapho kuboniswa ukubaluleka kwendoda ezoba yiqhawe. Kodwa njengoba ibhubesi liyinhlobo evikelekile, leli siko alisalandelwa. Namuhla, okwenziwayo kuphambene futhi baba ngabavikeli bengonyama.
Onamandla kakhulu, onezinkomo eziningi
Uma ufuna ukuba ngumuntu obalulekile noma onamandla phakathi kwalesi sizwe, kuzofanela uthole izinkomo eziningi. Ngoba lapha akubalwa ngesimo noma ngemali, ngokunengqondo. Kubo into eyigugu kunazo zonke imfuyo futhi noma ngubani onolwazi olukhulu esizindeni sakhe uzoba obaluleke kakhulu. Kufana nalokho kokubili ingcebo namandla phambi kwabanye.
Uhlelo lwabo lwezepolitiki lususelwa emihlanganweni yabadala
Abahlakaniphe kakhulu endaweni ngabantu asebekhulile futhi ngenxa yalokho, banezwi. Ngakho-ke, njengoba uhlelo lwabo lusatshalaliswa, okwenziwayo ukuhlangana nawo wonke amanye amalungu esizwe futhi kuxoxwe ngezinto ezithile. Lezi zingxoxo noma imihlangano isesidlangalaleni ngokwemvelo.
Umprofethi wabantu nemisebenzi yakhe
Ngaphakathi kwamasiko namasiko amaMasais sithola lokhu. Edolobheni kukhona umuntu obiziwayo umprofethi noma 'uLaibon'. Uyini umsebenzi wayo? Yebo, usebenza njengomxhumanisi phakathi kwesizwe uqobo noNkulunkulu uNgai. Awuwutholi umsebenzi onjengalona ngenhlanhla, kepha ungofuzo, ngakho-ke wedluliselwa kusuka kwesinye isizukulwane kuya kwesinye futhi unqunyelwe kubantu abambalwa kuphela. Kufana nohlobo lwejaji ngasikhathi sinye futhi olunombono wekusasa. Ngaphezu kwakho konke lokhu, nguyena futhi ophethe imikhosi futhi onikeza ukuqhubekela phambili empini noma ophethe ukumema amanzi ukuze enze imvula ine.
KumaMasais kuyinto engcwele, ngoba yilokho okudla imfuyo. Ngakho-ke ngokwesiko labo kwakuthiwa uma umuntu ezoshaya noma athethise ingane, wayekwazi ukusiphula utshani bese engajeziswa. Okungukuthi, wenza isijeziso singasebenzi.
Awusoze wakhuluma ngomufi
Yize sinenkolelo yokuthi abantu bafa kuphela uma beyeka ukukhuluma ngabo noma uma bekhohlwa, laba bantu abaqoqi ukukhuluma ngakho phakathi kwamasiko abo. Ngakho-ke lapho umuntu efa, ngeke besakhuluma lutho ngaye ngqo, ngoba uma kufanele basikisele, khona-ke bamqamba ngegama lesidlaliso. Ngokungeziwe, bakubheka lokho bambalwa kuphela abakhethiwe abafanelwe impilo yaphakade, izidumbu bazizishiya phansi zivulekele abadlayo ukuze badle. Abantu ababaluleke kakhulu besizwe bazongcwatshwa, kepha njalo endaweni ejulile. Eceleni kwabo bazobeka utshani, kanye nezimbadada nomhlanga.
Abesifazane, abesilisa nobucwebe babo
Impela ukubonile lokho, ngaphezu kwezingubo zabo ezibomvu, abesifazane nabo bafaka imigexo noma amasongo ahlukahlukene nezinye izesekeli ezimibalabala kakhulu. Zenziwe ngokwazo ngamapharele anemibala ehlukene. Kubo, kuzoba khona namacici nezinye izinsimbi. Ngaphezu kwalokho, izimbobo (ukunwebeka) zivame ukuba zikhulu impela, yingakho zivame ukulengisa izinto ezinombukiso, phakathi kwazo esigqamisa ezinye izimpondo zezilwane.
Kuyiqiniso ukuthi umqondo wesithembu usabalele ezizweni eziningi. Lapho benabafazi abaningi, amandla abo ayanda. Ngalesi sizathu, futhi ngokususelwa kulo mqondo, imishado ihlelwa kwazise owesifazane usemncane kakhulu. Kepha kufanele kushiwo ukuthi lokhu akukuvimbeli lokho ngaphambi kwe- umshado ohleliwe, bangaba nobudlelwano nabanye abantu abasha abalingana nabo.
Igazi lezinkomo umuthi omuhle kakhulu
Siyazi ukuthi izinkomo ziyindlela yokuziphilisa yalesi sizwe. Phambilini sike sathi utshani bungcwele, ngoba babuhlinzeka ngokudla kwezinkomo, nakho okungcwele. Kepha kwesinye isikhathi uma belahla isilwane kuzodliwa futhi kakhulu, basebenzise yonke into ngokuphelele. Kusukela ezimpondweni kuye ezinsikeni ukuthi lezi zingasebenza njengomhlobiso. Kepha uma kukhona okuthile okubalulekile kuyigazi, ngoba bakubheka njengokuvuselelwa kwangempela. Yingakho ijwayele ukunikezwa abantu abagulayo noma abafana uma besanda kusokwa. Kujwayelekile nokuthi benze uhlobo lweyogathi ngobisi nangegazi lezilwane.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Amasiko namasiko amaMasais